NYPD bhomba squads cordons nzvimbo yakatenderedza UN chivakwa pamusoro pe 'inofungidzira package'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » NYPD bhomba squad squad cordons nzvimbo dzakakomberedza UN kuvaka pamusoro pe'kufungidzira package '
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
NYPD bhomba squad squad cordons nzvimbo dzakakomberedza UN kuvaka pamusoro pe'kufungidzira package '
NYPD bhomba squad squad cordons nzvimbo dzakakomberedza UN kuvaka pamusoro pe'kufungira pasuru '.
Ichi chivakwa chinogara kune akawanda eTurkey diplomatic zvivakwa muNew York, kusanganisira mishoni uye mumiriri, uye zvakare inoitisa zviitiko zvetsika dzeTurkey.
Pasuru yakawanikwa pamberi peTurk House muNew York City.
Turk Evi (Imba yeTurkey) yakavhurwa kuruzhinji chete mwedzi wapfuura.
Ichi chivakwa chinogara kune akawanda eTurkey diplomatic zvivakwa muNew York.
New York Police department (NYPD) bhomba squad yakadaidzwa mukati apo pakafungidzirwa pakawanikwa pamberi peTurkey House muNew York, padhuze ne Nyika Yakabatanas chivakwa.
Mapurisa akashevedzwa panzvimbo iyi panguva dzemasikati.
NYPD boka remabhomba rabva rabvisa nzvimbo ine mabhuroko maviri yakatenderedza chivakwa ichi, chiri muna First Avenue muManhattan.
Turk Evi (Turkish House) yakavhurwa kune veruzhinji mwedzi wapfuura. Inowanikwa muembassy-inorema East Midtown nharaunda pa United Nations Plaza, yanga yave ichivakwa kwemakore mana.
Kune zvakare akati wandei ekugara mukati meimba.